Fahalalahàna miteny · Jolay, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Fahalalahàna miteny · Jolay, 2017
Tantara mikasika ny Fahalalahàna miteny tamin'ny Jolay, 2017
Rosia25 Jolay 2017
Mpikatroky Ny Zon'Olombelona Voampanga Ho Manao Fampihorohoroana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana25 Jolay 2017
Niharan'ny herisetran'ny manampahefana Bahrainita hatrany i Al-Saegh noho ny fikatrohany handala ny zon'olombelona.
Bilaogy Bangla: Famahana Fady Sy Adihevitra
Bangladesh24 Jolay 2017
Manan-jo hanoratra ny mpanoratra rehetra, sy fahalalahana haneho ny hevtr'izy ireo. Saingy tsy midika izany fahalalahana izany fa afaka manoratra na inona na inona izy ireo. Misy fetrany ny fahalalahana. Mino manokana aho fa lohahevitra afaka hiadian-kevitra ny fivavahana. Saingy tokony hifanaja, marina ny adihevitra ary tsy mandratra ny hafa.
Iran: Kandidà Reformista Voaràra Tsy Hirotsaka Hofidiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana23 Jolay 2017
Nampihena ny fanantenan'izy ireo amin'ny fifidianana parlemantera amin'ny volana ambony ny Iraniana Reformista rehefa nesorin'ny manampahefana ny ankamaroan'ny kandidàn'izy ireo, anisan'izany ireo Solombavambahoaka sasany sy ilay "Rain'ny ny Repoblika Islamika", zafikelin'i Ayatollah Khomeini. Ao Iran, tsy maintsy mahazo fankatoavana alohan'ny hifidianan'ny vahoaka azy ny kandidà.
Syria: Hetsika Avotsory i Tariq
Malaza ny bilaogy Syriana amin'izao fotoana izao amin'ny fisian'ny famoretana hafa ataon'ny fitondrana Syriana amin'ny fahalalahana miteny. Saingy ny iray taminay indray tamin'ity indray mitoraka ity. Efa teo amin'ny enim-bolana teo ny raharaha Tariq no nanintona ny sain'ireo bilaogera - enim-bolana, mbola any am-ponja i Tariq.
Mpampianatra Oniversitera Thailandey Nampanantsoin'ny Miaramila
Azia Atsinanana22 Jolay 2017
Mampatsiahy ny manampahefana ny Tambajotra Akademika Thailandey miaro ny Zo Sivily fa tsy mandràra ny olona hilanja sora-baventy ny lalàm-paorenana ao amin'ny firenena.
Matanjaka Hatrany Ny Mozikan'ny Fifaharana Ao Ethiopia, Na Dia Eo Aza Ny Famoretana
Afrika Mainty22 Jolay 2017
Ao anatin'ny hetsi-panoherana miroborobo sy ny herisetra famoretana ataon'ny governemanta, nanomboka niseho ampahibemaso sy nampiaka-peo ireo mpihira Afan Oromo izay nahatonga ny aingam-panahy ho an'ny hetsiky ny mpanohitra.
Rosia: “Ny Vato Vaovao Nasondrotry ny Tany”
Eoropa Afovoany & Atsinanana22 Jolay 2017
Nandika ny santionany tamin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fomba ahazoana asa sy momba ny fianarana ao Rosia amin'izao fotoana i Lyndon Allin.
Shina: Reharehan'ny Chongqing
Azia Atsinanana21 Jolay 2017
Nandratra ny reharehan'ny olom-pirenena Chongqing ny tatitra momba ny lalao baolina kitra avy amin'ny Zhang Xiaozhou.